iOS 14.5 မှာ ဘယ်လို Features တွေပါဝင်လာသလဲ ? - MiteLar
iOS 14.5 မှာ ဘယ်လို Features တွေပါဝင်လာသလဲ ?
iOS 14.5 မှာ ဘာFeatures ပါဝင်လာသလဲ ?
ယနေ့ Apple သည် iOS 14.5 နှင့် iPadOS 14.5 ကိုအများပြည်သူသို့ဖြန့်ချိပေးခဲ့ပြီး iOS 14.5 features အသစ်များနှင့်အပြောင်းအလဲများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ဤနောက်ဆုံးသတင်းများသည် iOS နှင့် iPadOS 14 ဖြန့်ချိသည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောအကြီးမားဆုံး update များအနက် 5G နှင့် New Siri အကြောင်း အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကိုမီးမောင်းထိုးပြထားပါသည်။
ဒီ iOS Update ကိုတင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းအား (50) နဲ့အထက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး Wifi Network တစ်ခုလည်းရှိဖို့လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ WiFi မရှိဘူးဆိုရင်တော့ Date ကိုတစ်လလောက်နောက်ရွှေ့ပြီး Internet နဲ့တင်လို့ရပါတယ်။iOS 14.5 Update တင်မယ်ဆိုရင်တော့ Settings > General > Software Updates ထဲမှာဝင်တင်နိုင်ပါတယ်။
Siri ကိုအသံပြောင်းသုံးနိုင်တော့မယ့် iOS 14.5
Siri ကိုအသံတမျိုးတည်းနဲ့ကြားနေရတော့ ပျင်းနေကြပြီမလား။ မပူပါနဲ့ ဒီတခေါက် iOS 14.5 Update မှာ Siri ကိုအသံပြောင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြီးပဲလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်သေးဘူး ဘာလေးတွေများ ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ဖတ်ကြည့်လိုက်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
iOS 14.5 ဆိုတာ iOS 14 ကိုအဆင့်မြင့်တင်မှုပြုလုပ်ထားတဲ့ Version တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ပြောင်းလဲမှု ကြီးကြီးမားမားတော့ တွေ့ရဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီ Update မှာ Siri ကိုအခြား အသံတွေနဲ့ ကြားရတော့မယ့်အပြင် ပြောင်းလဲမှုအကြီးကြီးဖြစ်တဲ့နောက်တခုကတော့ iPhone ကို Apple Watch အသုံးပြုပြီး Unlock ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Covid ကာလရဲ့ Face ID အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းနိုင့်မယ့် ဒီ Feature ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင် watchOS 7.4 တင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အကုန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ iPhone Setting ထဲကိုသွား > Face ID and Passcode ထဲကိုဝင် ပြီးရင်တော့ “Unlock with Apple Watch” ဆိုတာလေးကိုရှာပြီး သူဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွေအတိုင်းလုပ်လိုက်ရင် ဒီ Feature ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက် Feature တခုတော့ Security ပိုင်းအတွက်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ App Tracking Transparency ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Feature ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောရရင်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို Third Party App တခု Installed လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့၊ အဲ့ဒီ App ဟာ တခြား Apps နဲ့ Website တွေထဲကို လိုက်ပြီးနောက်ယောင်ခံလိုက်နေသလား ဘာလားဆိုတာကို ထိန်းချုပ်ပေးမယ့် Feature တခုဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Third Party Apps တွေက Tracking လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေရာမှာ Track လုပ်ခွင့်ပြုမလား၊ မပြုဘူးလားဆိုတဲ့ ရွေးချယ်စရာ ၂မျိုးလည်း ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ Siri ကို Improvement လုပ်ထားတဲ့အပိုင်းပါ။ Apple ဟာ ဒီတခေါက်မှာတော့ Siri ကို မတူညီတဲ့ အသံအနေအထားတချို့ကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ အကယ်၍ iOS 14.5 တင်ပြီးလို့ Siri ကိုအသံပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Setting ထဲကိုဝင် > Siri ထဲကိုထပ်ဝင် ပြီးရင်တော့ Siri Voice Option ထဲမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အသံကိုရွေးချယ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Emoji ၂၀၀ ကျော်ကိုလည်း iPhone & iPad User တွေအတွက်ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပါသည် ၊၊
Dual-SIM 5G ပံ့ပိုးမှု
iOS 14.5 တွင် “iPhone” ၏ Dual-SIM လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုအခွင့်ကောင်းယူသူများအတွက်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောစွမ်းဆောင်ချက်ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် iPhone 12 မော်ဒယ်များတွင် Dual-SIM mode တွင် 5G ကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးသည်။iOS 14.5 မတိုင်မီက Dual-SIM mode သည်တရုတ် မှလွဲ၍ နိုင်ငံအားလုံးတွင် LTE ကိုကန့်သတ်ထားသော်လည်း iOS 14.5 သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ Dual-SIM သုံးစွဲသူများကိုလိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင် 5G အမြန်နှုန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်သည်။
T-Mobile Standalone 5G ကွန်ယက်ပံ့ပိုးမှု
T-Mobile သုံးစွဲသူများအတွက် iOS 14.5 သည်ကုမ္ပဏီ၏သီးခြား 5G ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့ပါသည်။Standalone 5G အထောက်အပံ့သည် LTE ကွန်ယက်တွင် 5G network နှင့် piggybacking မလိုဘဲ 5G network သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုပေးပြီး၎င်းသည်အချို့အခြေအနေများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သော 5G အကွာအဝေးနှင့် latency နိမ့်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။ update ကိုထည့်သွင်းပြီးပါက T-Mobile သုံးစွဲသူများသည် iPhone 12 မော်ဒယ်များတွင်သူတို့၏ 5G ဆက်သွယ်မှုတိုးတက်မှုအချို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
5G Data Usage တိုးတက်မှု
Smart Data Mode သို့တိုးတက်မှုများသည်ဒေတာအသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် 5G ကွန်ယက်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည်။ GiPhone 12 မော်ဒယ်များတွင် carrier များအတွက်ထောက်ပံ့သော 5G အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ roaming ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။